ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating Systems ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲ။ | Linux မှ
GNU / Linux ကိုအသုံးချရန်အသုံးချပရိုဂရမ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေ၊ အထူးဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် ၏သဘောပေါက်ထံမှအတူတူပင်၏စွမ်းဆောင်ရည် အချို့သောယုတ္တိ (software) သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဟာ့ဒ်ဝဲ) ပြောင်းလဲမှုများကို။ ဟာ့ဒ်ဝဲအပြောင်းအလဲများဖြစ်လျှင် Operating System သည် Hard Disk Space, RAM Memory, CPU အမျိုးအစားကိုအခြားအရာများအကြားတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်။
ဤထုတ်ဝေမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စများတွင်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များသည်ယုတ္တိနည်းသောအဆင့်တွင်ရှိလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်ပတ်နိုင်မှုအဆင့်ကိုသုညကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်ခွင့်ပြုထားသော application များအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအားအသုံးပြုခြင်း။
1 Terminal ကိုအသုံးပြုပြီးအကောင်းဆုံး
1.1 Preload နှင့် Prelink
1.2 Deborphan နှင့် Localepurge တို့ဖြစ်သည်
1.3 Terminal ရဲ့ချိန်ညှိချက်များ
2 ဂရပ်ဖစ် applications များ၏အဆင့်မှာ
2.1 Bleachbit ပါ
Terminal နှင့်ပရိုဂရမ်ရေးသားထားသော Script ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဤကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများရှိသည် - «Script ကို သုံး၍ GNU / Linux Maintenance လုပ်နည်း။ y Shell Scripting ကို သုံး၍ ကိရိယာများတွင်ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ငါတို့မကြာသေးမီကအကြောင်းပြောဆိုသော။ ဤဥပမာ ၂ ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System ကိုခေတ်မီအောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှိုက်သရိုက်များကင်းဝေးစေပြီး ၄ င်း၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ Operating Systems ကိုခေတ်မီအောင်ထိန်းသိမ်းရန်အခြေခံအချက်များဖြစ်သည်။
သို့သော်၏သဘောပေါက် ဤလက်စွဲစာအုပ်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အချို့သောအထုပ်များတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောဒြပ်စင်များ၏ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းဖြည့်စွက်နိုင်သည် OS ၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်လုံခြုံစိတ်ချမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်စေရန် terminal application များအသုံးပြုခြင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရန်ဥပမာကောင်းတစ်ခုသည် package များ၏ installation နှင့် configuration ဖြစ်နိုင်သည်။ » Preload »နှင့်» Prelink « ပေါင်းအထုပ် Deborphan »နှင့်» Localepurge «။
Preload နှင့် Prelink
preload ဒါက terminal application တစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့် application မ်ားကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းကို RAM ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ကြိုတင်တင်ထားသည် သူတို့ကိုစတင်သောအခါသင်၏ startup အချိန်ကိုလျှော့ချ။ စဉ်တွင် ကြိုတင်လင့်ခ် ၎င်းသည် terminal app တစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည် OS libraries နှင့်အရေးကြီးသော application များ၏ dynamic load ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းနှစ်ခုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux စနစ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Deborphan နှင့် Localepurge တို့ဖြစ်သည်
Deborphan သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System တွင် "orphaned" packages များကိုတွေ့ရှိသော utility ဖြစ်သည်။ မိဘအထုပ် (အခြားသူများကိုမှီခိုမှုများမှတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းသောအထုပ်) ကိုထုတ်ယူသောအခါအထုပ်သည်“ မိဘမဲ့»အခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်းသတိရရန်သတိပြုပါ။ “ child” အထုပ်သည်အသုံးမလိုဘဲ disk ထဲတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘဲနေရာမရှိသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Deborphan သည်သင်၏ထည့်သွင်းမှုပေါ် မူတည်၍ မည်သည့် package များတွင်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့် package များစာရင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအသုံးချမှုသည်စာကြည့်တိုက်များကိုရှာဖွေသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကဏ္ all အားလုံး၏ package များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့် Deborphan ကိုအောက်ပါ command line ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် -
စဉ် Localpurge သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System အတွင်းမှ configured များမှ လွဲ၍ အခြားဘာသာစကားများနှင့်သက်ဆိုင်သော manual များနှင့်အကူအညီများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည့် utility ဖြစ်သည်။
အသုံးများသောအသုံးချပရိုဂရမ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာခဏဘာသာစကားများ (စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှအသုံးမပြုရသောအခြားဘာသာစကားများတွင်လက်စွဲနှင့်အကူအညီများကိုတပ်ဆင်လေ့ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ရေရှည်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုဘဲဒေတာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင်နေရာများစွာယူလေ့ရှိသည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating System ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူစေတယ်။
super-user root မှလွဲ၍ administrator user ကိုသုံးပါဆိုလိုသည်မှာ sudo command ကိုသုံးရန် root permissions ရှိအသုံးပြုသူကိုဆိုလိုသည်။ နှင့်အသုံးပြုသူများအသီးအသီးအဘို့ပုံမှန်အသုံးပြုသူ အသုံးပြုရန်ကွန်ပျူတာထဲသို့ log ရန်။
console (သို့) terminal အတွင်းရိုက်လိုက်သော command တိုင်းကိုမှတ်သားထားသော terminal event log script ကိုသုံးပါ ၎င်းတွင်ရိုက်ထည့်လိုက်သော command တိုင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်ပို့စ်၌ဤထပ်မံရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
မှန်ကန်သောတန်ဖိုးများကိုသိမ်းထားပါ BIOS နှင့် Operating System တို့၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်။
၏မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုသေချာစစ်ဆေးပါ ဖိုင်များ» interfaces «, » resolv.conf «, » NetworkManager.conf »နှင့်» sources.list «
ဂရပ်ဖစ် applications များ၏အဆင့်မှာ
ဒီအဆင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ application တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစာရင်းကိုကြီးကြီးမားမားမကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့၊ အချို့ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
Bleachbit သည် Windows ၏ကျော်ကြားပြီးလက်တွေ့ကျသော "ccleaner" ကဲ့သို့ကြီးမားသည့် Platform utility တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာသည် hard disk ပေါ်တွင်နေရာလွတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ccleaner ကဲ့သို့ကဲ့သို့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်များကိုဖျက်ရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုပိုမိုထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ disk ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သီအိုရီအရလွတ်လပ်သောနေရာကိုပိုမိုထိရောက်စွာတိုးမြှင့်စေပြီး၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်သည်အချက်အလက်များကိုအနည်းဆုံးအလွယ်တကူပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
ဤစတိုင်၏အခြားအလွန်ကောင်းသော application များမှာ: ရှင်းလင်းသူများ, Stacer y Gcleaner ပါ.
၎င်းသည် graphical utility ဖြစ်ပြီး hard disk space အသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်း၊ လွတ်လပ်သောနေရာ၊ directory များ၏အရွယ်အစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ OS ၏ဖိုင်များစသည့်အချက်အလက်များကိုအမြင်အာရုံတင်ပြမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Baobab သည် hard drives ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ အခြားစက်ရုံများရှိဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသနေရာများရှိ၊ မရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးများသော Distros repositories မှ console မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော Baobab နှင့်ဆင်တူသည့်အပလီကေးရှင်းများ - ရုပ်ရှင်ရုံ, JDiskReport, QDirStat y k4dirstat.
၎င်းသည် Operating System အတွင်းမလိုအပ်သော (သို့) ပိုလျှံသောဖိုင်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (သန့်ရှင်းရေး) ပြုလုပ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် GTK + Graphical Interface နှင့် command line interface ပါဝင်သည်။ disk space ကိုထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက်အားလုံး။ ၎င်းကိုအသုံးအများဆုံး Distros repositories မှ console မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် package များကို uninstall လုပ်ရန်နှင့်ဥပမာ -
မိဘမဲ့ binaries ။
အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် FSLint နှင့်ဆင်တူ application များ: ဖိုင်တွဲများကိုရှာဖွေပါ y GDuplicateFinder.
ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သောအခြားသူများကိုသင်သိလျှင်သူတို့ကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီဆောင်းပါးကငါတို့အားလုံးကို GNU / Linux Systems ကိုအခြားစီးပွားဖြစ်တစ်ခုထက်ပိုတူအောင်ဖြစ်စေဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လာမယ့်ပို့စ်အထိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating Systems ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Linux မှာလှည့်လည်ခဲ့တုန်းက
Hector elizalde ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် BleachBit ကို Linux Mint 19.2 စနစ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ၎င်းကို Root mode တွင်အသုံးပြုသောအခါသတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖျက်ပစ်လိုက်သောအရာများပျောက်ဆုံးသွားသောကြောင့် ထာဝရ ထိုအရပ်မှထွက်အပေါ်အလွန်ကောင်းလှ၏
Hector Elizalde အားပြန်ပြောပါ
ရှင်ပေါလု letelier ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့ပို့စ်။ ဒါပေမယ့် Dephorban ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေနဲ့အတူသုံးဖို့အကြံပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ အနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသူ (ငါလို) မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် desktop သို့ ၀ င်သောအခါကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ကိုမှားယွင်းစွာပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် xserver-xorg ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ လေးနက်သောအရာမရှိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်၎င်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ
Pablo Letelier သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ, ပါပလော။ အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးပြီး၊ ပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုရန်ဒေဗောရတောင်းဆိုသည့်ဖျက်သိမ်းမှုကိုလက်ခံလျှင်၊ သင်အစီရင်ခံသောပြproblemsနာများကဲ့သို့သောပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအမိန့်ဖြင့်အစပိုင်း၌များစွာသုံးစွဲခဲ့သည်။